Lwin Oo Htwe Trading Co., Ltd. – Just another WordPress site
Email Us info@lwinoohtwe.com
Call us +95 1 9640133
ပေးချေရသောငွေပမာဏနှင့် ရရှိသောကုန်ပစ္စည်းပမာဏ ထာဝရညီမျှစေရမည်
အမှတ်(၂၄၂)၊ တန်(၁၀၀)ဆန်စက်ဝန်း ၊ (၁၈) ကုန်းထိပ် ၊ သန်လျင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း - ၀၉ -၉၆၂၇၀၉၀၇၈၊ ၀၉- ၉၇၈၃၈၇၆၃၇၊ ၀၉- ၄၄၅၄၄၁၁၁၇၊
LWIN OO HTWE 2
ဆ-၁၇/၁၈၊ သီရိရတနာ လက်လီလက္ကားရောင်းဝယ်ရေး၊
ဖုန်း- ၀၁ ၉၆၉၀၀၁၀၊ ၀၁- ၉၆၉၁၉၇၇၊ ၀၁ ၁၂၂၄၂၂၀၊ ၀၉ ၇၃၁၇၀၀၂၀
အမှတ် (၃၇)၊ က (စီ)၊ ကျိုက်က္ခမီလမ်း၊ ဈေးကြိုရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့။
ဖုန်း- ၀၅၇ -၂၀၂၅၅၁၀၊ ၀၅၇ -၂၀၂၅၅၁၁၊ ၀၅၇ -၂၀၂၅၅၁၂၊
၀၉ - ၄၄၅၄၄၁၁၁၀၊ ၀၉ - ၄၄၅၄၄၁၁၁၂၊
What Building and Look Product for ?
- GI (Plain )
- Alu Zinc
- PPGI (Design)
- (U, H, I) Beam
- Decking Sheet
- Deformed Bar
- Wire Rod
T A U N G GYI B R A N C H
အမှတ် (၃)၊ အနောက်မြို့ပတ်လမ်း၊ ဈျေးပိုင်းရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့။
ဖုန်း- ၀၈၁ ၂၁၂၁၄၅၆၊ ၀၈၁ ၂၁၂၅၄၅၄၊ ၀၉ - ၇၆၈၂၂၇၉၅၀၊ ၀၉ -၇၆၀၇၀၉၄၁၉၊
အမှတ် (၁၀၄)၊ နှင်းဆီလမ်း၊ ပြည်တော်သာ တောင်ကြီးမြို့
ဖုန်း- ၀၈၁- ၂၁၂၂၅၁၃၊ ၀၈၁- ၂၀၅၁၅၅၅၊ ၀၈၁- ၂၀၅၂၅၅
အမှတ် (၇/၄)၊ နောက်မြို့ပတ်လမ်း၊ ရွှေတောင်ရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့။
ဖုန်း- ၀၈၁- ၂၀၀၀၇၅၊ ၀၈၁- ၂၁၂၃၆၄၃၀၉-၄၄၅၄၄၁၁၁၄၊ ၀၉-၄၄၅၄၄၁၁၁
၀၉- ၂၅၄၀၃၅၁၂၉၊ ၀၉- ၂၅၉၂၈၇၄၆၄
၀၉ -၇၈၂၂၇၄၈၂၀၊ ၀၉ -၄၄၅၄၄၁၁၁၆
TAUNG GUU BRANCH
အမှတ် - (၄၈၉၊၄၉၀) ရန်ကုန်- မန္တလေးလမ်းမကြီးဘေး၊ ပုဂံလမ်းနှင့် အင်းဝလမ်းကြား
အရှေ့ခြမ်း အမှတ်(၂၂) မင်းကြီးညိုရပ်ကွက်၊ တောင်ငူမြို့။
ဖုန်း -( ၀၅၄ )၂၅၆၇၈၊၂၅၆၇၉၊(၀၉) ၄၄၅၄၄၂၂၂၀၊
We have many branches in Myanmar
- Taung Gyi
- Taung Ngu
အမှတ် (၁၂၊ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇)၊ ၆၂ လမ်းနှင့် ရတနာလမ်းထောင့်
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ စက်မူ (၁)၊ မန္တလေးမြို့။
ဖုန်း- ၀၂-၅၁၅၄၈၉၀၊ ၀၂-၅၁၅၄၆၉၆၊ ၀၂-၅၁၅၄၈၉၁၊
Allow us to introduce our company , Lwin Oo Htwe Co.,Ltd.The Company was started asafamily business in 1983 and officially established as trading company limited on February 2010. The core business of our company is to manufacture and distribute steel-related products such as zinc sheets and pre-painted galvanized iron sheets .We import top-quality raw materials from trusted and reliable partners in Japan , India , Taiwan , Vietnam and China. We value wholesale and retail as well as consumer markets.We Offer quality products at reasonable prices.
Our Brand “Two Stars” was born to introduce our better quality product, Two Star (Red) and Two Star( Black) are produced and distributed in the market. We strive to present our customers with the product that is of same value as paid.We also want to introduce our products such as GI , PPGI , Alu Zinc , GI (Plain) , Four Angle , Colour Coil ,Colour Plain , Colour4Angle , Composite , Smart Board , Plywood , Wire Rod , Deformed Bar, Hollow , C- Channel , Angle, I- Beam ,H-Beam , U –Beam , Decking Sheet etc.
ကျွန်တော်တို့ A to Z By Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd ၏ (၅) ခုမြောက် Royal AtoZ Holdings Co.,Ltd ရုံးခွဲကို မော်လမြိုင်မြို့ တွင် ရဟန်းသံဃာတော်များနှင့် ပရိတ်တရားတော်များ ရွတ်ဖတ်သရစ္ဈာယ်၍ အရှေ့ တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချူပ်တိုင်းမှုးနှင့်တကွ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ စည်ပင်သာယာရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးတို့ ဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ဖဲကြိုးဖြတ်၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
(English) Galvanized Iron Sheet and Angle
U – Beam
(English)4Angel
I – Beam
Are you ready foranew job?
Monday February 18th, 2019 Comments off.
A to Z By Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd Grand Opening Ceremony
Moe Htet Gabar Group Of Companies , AtoZ By Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd , Golden Wax Company Limited
Friday August 10th, 2018 Comments off.
AtoZ By LwinOoHtwe Trading Co.,Ltd’s Donation at Yangon General Hospital.
Wednesday July 18th, 2018 Comments off.
2018 Staff Party
Thursday June 28th, 2018 Comments off.
AtoZ By Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd’s Family Donation
Monday June 25th, 2018 Comments off.
Our company is to manufacture and distribute steel-related products such as zinc sheets and pre-painted galvanized iron sheets for construction industry.
Building – 25, Room – 7/8/9, Kyauk Sein (4) Street, Saw Bwar Gyi Kone, Insein Township, Yangon.
+95 1 9640133, 9640144, 9640051, 9640019, 9663714, 9666189, 706933
Room (713), Building - B, Thiri Condo,9Mile, Mayangone Township, Yangon.
+959 441799990, 09 441799991, 09 441799994
Copyright © 2018 Lwin Oo Htwe Trading Co., Ltd. - Designed by World Wide Myanmar